Seijo Gakuen Mae Station (23rd Oct)
English • Oct 24, 2021
Our blood are still boiling despite of the cold weather
We TTAJ undertook our weekly pamphlets and tissues sharing activity on this week Saturday (2021/10/23) at Seijo Gakuen Mae Station.
TTAJ did not do Fund Raising but we had to accept the donation from generous Japanese Donors.
The total of 47694 Yen Fund has been transferred to RTM along with the list. The weather is getting colder in Japan since the winter has kicked in.
Despite the Icy wind, cold weather, we would like to express our deepest gratitude to our volunteer brothers and sisters, and to the donors of foods ans beverages for our volunteers suffering from cold weather.
We would like to express our gratitude to the camera men who came to record and support us weekly.
We were able to hand out approximately 300 pocket tissues and pamphlets from 2-5pm.
"ဥတုရာသီ ဘယ်လိုပင်အေးပါစေ ၊ ငါတို့ရင်ထဲက အပူမီးတွေနဲ့ သွေးတွေက ပွက်ပွက်ဆူနေဆဲ"
ယမန်နေ့ ၁၀ လပိုင်း ၂၃ ရက်နေ့မှာ TTAJ အဖွဲ့အနေနှင့် Pamphlets / Pocket Tissue ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို Tokyo / Seijo Gakuen Mae ဘူတာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
TTAJ အဖွဲ့အနေဖြင့် အလှူငွေ ကောက်ခံခြင်းမရှိသော်လည်း စေတနာရှင် ဂျပန်လူမျိူးများမှ အလှူငွေ လာရောက်ထည့်ဝင်ကြတာမို့ လက်ခံယူခဲ့ပါတယ်။
လက်ခံရရှိသမျှ အလှူငွေ စုစုပေါင်း ၄၇၆၉၄ ယန်းကို စာရင်းနှင့်တကွ Revolution Tokyo Myanmar - R.T.M အဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဆောင်းဝင်လာပြီမို့ ရာသီဥတုက သိသိသာသာ အေးလာခဲ့ပါတယ်။လေတွေတိုက်ပြီး ရာသီဥတု အေးစက်နေတဲ့ကြားက တကူးတက လာရောက်ကူညီ အားဖြည့်ပေးခဲ့ကြသော Volunteers ညီအကို မောင်နှမများ ၊ချမ်းလို့တုန်နေတဲ့ အဖွဲ့သားများအတွက် စားစရာနှင့်မုန့်များ လှူဒါန်းပေးပါသော အလှူရှင် များ၊ အပတ်စဉ်တိုင်း လာရောက်အားဖြည့်ပေးပါသော ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယို မှတ်တမ်း ရိုက်ကူးပေးပါသော Camera သမား များအားလုံးကို TTAJ မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။
နေ့လည် ၂ နာရီမှ ၅ နာရီ အတွင်းလက်ကမ်းစာစောင်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်၊ တစ်ရှူး အခုရေ ၃၀၀ ကျော်ကို ဂျပန်ပြည်သူ/သားတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။